बलिउडमा अर्को पोर्न स्टारको डेब्यु, पोष्टरले मच्चाएको तहल्का ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood बलिउडमा अर्को पोर्न स्टारको डेब्यु, पोष्टरले मच्चाएको तहल्का ?
बलिउडमा अर्को पोर्न स्टारको डेब्यु, पोष्टरले मच्चाएको तहल्का ?
मुम्बई – बलिउड अभियनमा पुर्व पोर्न स्टार सन्नि लियोनीको चर्चासँगै फेरि अर्को एक पोर्न स्टार पनि थपिने भएकी छन् । चर्चित निर्देशक राम गोपाल वर्माको नयाँ चलचित्रबाट अर्को पोर्न स्टारले अभिनयमा डेब्यु गर्ने विभिन्न अनलाईनहरुले चर्चा गरेका छन् ।
फरक धारको चलचित्र निर्माण गर्ने मुडमा बर्माले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’का पोेष्टर सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । उक्त पोष्टर सार्वजनिक गरिए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न अनलाईनहरुमा तहल्का मच्चिएको चर्चा गरिएको छ ।
चलचित्रको यो पहिलो पोष्टर हो । यस पोष्टरमा लिड अभिनेत्री निकै बोल्ड अवतारमा देखिएकी छन् ।
चलचित्र ट्रेलर पनि तयार गरिएको जनाईएको छ ।
के सलमान खान नेपाल आउँदैछन् ?